Maitiro ekugadzira ekuwedzera kutengesa nekutengesa kwepurogiramu | ECommerce nhau
Maitiro ekugadzira ekuwedzera kutengesa nekutengesa kwepurogiramu
Eva maria Rodriguez | | CMS uye Technology
La programmatic kutenga ndeye otomatiki kushambadzira kufungidzira yekutenga sisitimu iyo inokutendera iwe kutora mukana wesimba rezvigadziriso zve DSP mapuratifomu (Demand Side Platform) yekuwana zvigadzirwa zvepasirese panguva imwe chete uye munguva chaiyo inosanganisira zvakawanda zvekushambadzira pasekondi izvo zvinoenderana nezviri kutsvakwa nemushambadzi wega wega.
Chinhu chinonakidza pamusoro pekutenga kwepurogiramu ndechekuti inoitika nzira inobvumidza iwe kutenga nzvimbo munzvimbo dzese dzeAdExchanges, midhiya uye mapeji ewebhu kubva kune imwechete control panel, kutsvaga modhi yekutenga kune vateereri, vashandisi, uye kwete kutsvaga asiri- vateereri kuverenga. Uye zvakare, izvi zvinovandudzika kana maitiro nemaitiro ekudzokorora achishandiswa.
1 Kurudziro yekugadzira yekuwedzera kutengesa nekutengesa kwepurogiramu
1.1 Tsanangura zvinangwa uye uve akajeka kana chiri chiBranding kana Performance chiito:
1.2 Ziva nharaunda uye ongorora maitiro evashandisi
1.3 Chengetedza iyo brand
1.4 Sefa kunze kwezvinhu zvisingadiwe
1.5 Shandisa mafomati akakodzera uye unetseke nezveCTR
1.6 Ongorora ruzivo usati waita chero shanduko kumushandirapamwe
1.7 Chengetedza pakuedza
1.8 Ipa kukosha kwevatengi kupfuura kudzokororazve
1.9 Kubheja zvakaoma pakati
Kurudziro yekugadzira yekuwedzera kutengesa nekutengesa kwepurogiramu
Zanox yakatanga makore mashoma apfuura Zanox RTB, tambo yekuvandudza yebhizinesi inogonesa nzira yekutenga midhiya munguva chaiyo nevashambadzi vanogona kusvika kune vateereri chaivo neshoko rakakodzera uye panguva yakakodzera. Kuti unzwisise mashandiro eiyo RTB (Real Time Bidding) yemabhidha modhi uye kuziva zvakanakira echirongwa chebhizimusi modhi, Zanox inopa gumi kurudziro kuti iwedzere kuwedzera kutengesa nekutengesa kwepurogiramu.
Tsanangura zvinangwa uye uve akajeka kana chiri chiBranding kana Performance chiito:
Izvo zvakakosha kuti ushandise yakakodzera KPIs yechinangwa chega chega. Huwandu hwekutengesa hwakagadzirwa uye mutengo wekutengesa zviratidziro zvakakosha, asi kana zvikashandiswa zvisina kutaurwa kuchinangwa chemushandirapamwe, haisi iyo nzira yakanaka yekuyera kufambira mberi. Uye zvakare, isu tinofanirwa kuve pachena nezve chiito chatiri kuzotora kuti tiwane rakakura chiratidzo chiratidzo kana chakakosha nhamba yekutendeuka.
Ziva nharaunda uye ongorora maitiro evashandisi
Usati watanga mushandirapamwe, nharaunda dzakasiyana dzinofanirwa kuongororwa kuti dzigadzirise uye mhedzisiro yevatengi pamahwendefa, nharembozha uye eCommerce. Iwe zvakare unofanirwa kudzidza iyo analytics yemutengi wako kuti uwane kuita kuri nani.
Chengetedza iyo brand
Zvinokurudzirwa kusarudza mudiwa waunovimbisa mhando yemhando. Iyo mhando ndiyo kadhi rekuzivikanwa rekambani. Kana bhanari isingaoneke mune yakakodzera mamiriro, inogona kukuvadza mufananidzo wako. Unofanirwa kuona kuti maturusi akakodzera anoshandiswa kuona mhando yemapeji aratidzwa neakasika ako. Izvo zvakare zvakafanira kudzora kuwanda kweshambadziro zvinokanganisa uye kuve neyakafanira tekinoroji kuve nechokwadi chekuona kuoneka kwechiziviso neangangodaro mushandisi.
Sefa kunze kwezvinhu zvisingadiwe
Isu tinofanirwa kubva kure nehusiku maawa uye otomatiki masystem uye nemazvo kugadzirisa hesheni, inokanganisa vashandisi panguva dzakanakisa dzakanangana nechinangwa. Kune izvi zvakakosha kuti uve neruzivo rwekuongorora rwevatengi vako. Inokurudzirwa kuvhara otomatiki vashandisi uye kugadzirisa CPM.
Shandisa mafomati akakodzera uye unetseke nezveCTR
Iwe unofanirwa kutanga mushandirapamwe nemhando dzakasiyana dzekugadzira. Izvo zvinonzi "kukanganisa" mafomati (300 × 250, 180 × 600…) inogona kuwedzera kuoneka kwemushandirapamwe uye kuwedzera kutarisisa kwevashandisi. Iwe zvakare unofanirwa kuongorora mhedzisiro yekutanga kuti uve neaya ari kushanda zvakanyanya uye unetseke nezvekuva nezvinhu zvekugadzira izvo zvine CTR yakanaka yekusimudzira.
Ongorora ruzivo usati waita chero shanduko kumushandirapamwe
Izvo zvakakosha kuti uve wakajeka kwazvo nezve shanduko dzichaitwa uye nei. Ramba uchifunga kuti chero shanduko inotora nguva kuti ukwanise kuongorora mashandiro ayo. Zvinokurudzirwa kuti usachinje kamwe kamwe, nekuti mushandirapamwe wega wega unoda chiyero kuti ukwanise kuita ongororo yakanaka.
Zvinokurudzirwa kuchengetedza chikamu chebhajeti kuyedza uye kuyedza akasiyana mafomati ekusika, akasiyana zvipo, zvikamu zvitsva kuti uwane nzira yakanakisa yekubata vatengi uye kuvakoka kuti vatenge. Dzimwe nguva kuisa mari mumatokisi iwe ausina kuvimba kare kunogona kukupa mufaro mukuru kana zvasvika pakuongorora mashandiro.
### Chengetedza muvhidhiyo
Zvakakosha kudzivirira kutepfenyura kushambadzira kweTV paInternet. Iwe unofanirwa kubata vateereri vepamhepo zvakasiyana kubva kune vateereri veTV. Kwavari, zvinokurudzirwa kuti ugadzire akakosha mavhidhiyo eiyi svikiro, uchigovera mafupi, akanaka kana anosetsa mavhidhiyo ayo anokubatsira iwe kugadzira yakanaka brand chiratidzo.
Ipa kukosha kwevatengi kupfuura kudzokororazve
Iwe unofanirwa kuwedzera kukosha kumutengi nekuwana vashandisi vese vatsva uye nekuita yakakwana yekudzosera manejimendi pasina kunyanya kukanganisa mushandisi Chiyero che 70% kudzokorora uye 30% kutsvaga inokurudzirwa pakutanga.
Kubheja zvakaoma pakati
RTB ichokwadi chakakosha chiri kukura zvakanyanya. Inofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti kubheja nenzira iyi kunoda kudyara kwakaringana kunodiwa, uye kukosha kwakakosha kwevanhu kunogara kuchigadzirisa mushandirapamwe wako kutsvaga kuwedzera mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Maitiro ekugadzira ekuwedzera kutengesa nekutengesa kwepurogiramu
Kirabhu E-Commerce inoronga iyo Cross-Border Summit 2015 muna Gumiguru 29 na30
Nei uchifanira kukwidziridza eCommerce yako kune nhare